Dhageyso Ra’iisulwasaaraha Soomaaliya oo dalka dib ugu soo laabtay. – The Voice of Northeastern Kenya
Dhageyso Ra’iisulwasaaraha Soomaaliya oo dalka dib ugu soo laabtay.
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane, Xasan Cali Kheyr, ayaa maanta dalkiisa dib ugu laabtay, kadib booqasho rasmi ah uu laba cisho qaadatay taasoo uu ku tagay dalka Boqortooyada Sucuudiga Carabiya.
Ra’iisul wasaaraha iyo wafdiga uu hogaaminayo ayaa intii ay ku sugnaayeen dalka Sacuudiga waxay kulamo kala duwan la qaateen Boqorka dalkaasi, Boqor Salmaan Bin C/casiis iyo dhaxal sugahiisa ahan wasiirka difaaca Boqortooyada Sacuudiga Maxamed Bin Salmaan, waxayna ka wada hadleen xoojinta xiriirka Labada dal iyo sidii la isaga kaashan lahaa arrimo ay ka mid yihiin ganacsiga , fursadaha maal-gashi ee dalka Soomaaliya ka jira iyo horumarinta dhaqaalaha guud.
Ra’isulwasaaraha Soomaaliya Xassan Cali Kheyre ayaa intii uu halkaasi ku sugnaa waxa uu soo booqday xaramka barakaysan, isaga oo halkaasi ku soo cumraystay, una soo duceeyay dalka iyo dadka Soomaaliyeed.
Xubno isugu jira wasiiro iyo xildhibaano katirsan dowlada fedraalka Soomaaliya ayaa wafdiga ra’isulwasaaraha ku soo dhaweeyay madaarka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho,wasiirka wasaarada warfaafinta xukuumada fedraalKa Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle ayaa ka warbixiyay waxyaabaha muhiimka ah ee uu ra’isulwasaaruhu masuuliyiinta wadanka Sucuudiga kala soo hadlay.
← DHAGEYSO Dib u eegista Dastuurka Soomaaliya oo la shaaciyay xiliga la soo gabagabaynayo.
DHAGEYSO Maaalinta calanka Soomaaliya oo maanta loo dabaal dagayo. →